Xabsiga Jijiga oo Maanta Laga Sii Daayey Maxbiis Gaadhaysa 400 – Rasaasa News
Xabsiga Jijiga oo Maanta Laga Sii Daayey Maxbiis Gaadhaysa 400
Jan 13, 2011 eritrea trouble, ethiopia, ogaden peace, ONLF, somalia, Xabsiga Jijiga oo Maanta Laga Sii Daayey Maxbiis Gaadhaysa 400
Maxaabiis ay tiradoodu kor u dhaaftay 400, oo ruux oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee Jijiga oo maanta la siidaayey. Maxaabiista oo isugu jira wiilal iyo gabdho aad u da,a yar ayaa ku eedaysnaa in ay ka tirsanaayeen ama ay taageerayeen ururka ONLF ee hore dagaalka ugula jiray dawlada Itobiya.
Ururka ONLF, ee heshiiska nabada la galay dawlada Itobiya ayaa qodob ka mid ahaa qodobadii uu heshiiska ku galay uu ahaa in ooda laga qaado dhamaan maxaabiista u dhalatay degaanka Somalida ee ku xidhan magaca ururka ONLF. Maxaabiista ku jirtay jeelasha Itobiya ee ku xidhnayd magaca ururka ONLF ayey tiradoodu kor u dhaafaysay 3,000 oo ruux oo la qabtay intii u dhaxaysay sanadihii 2006/09.
Ururka ONLF, ee nabada qaatay iyo taageeroyaashiisa ayaan aad ula dhacsanayn baryahan dambe sida ay wax u wadaan masuuliyiinta dawlad degaanka Somalida ee Itobiya. Masuuliyiinta dawlad degaanka Somalida ayaa lugta ku maratay qodob ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa oo ahaa in la faaruqiyo xabsiga Jijiga.
Dawlada degaanka ayaa heshiiskii uu ururka ONLF la galay dawlada, ka dib waxaa ay ku mashquushay arimo aan wax xidhiidh ah la lahayn qodobadii lagu heshiiyey iyo taabo galinta nabada la galay.
Dhawaan ayey ahayd kolkii ay dawlada dhex ee Itobiya soo faragalisay is-faham la,aan dhexmartay dawlad degaanka Somalida iyo masuuliyiinta ururka ONLF, iyada oo taageertay cabashada masuuliyiinta ururka ONLF, ay ka cabanyeen masuuliyiinta dawlad degaanka Somalida. Waxay xukuumada dhexe ku qasabtay masuuliyiinta dawlad degaanka Somalida in ay ooda ka qaado maxaabiista, loogana furo xafiisyo ururka ONLF dhamaan gabalada dalka, si ay u sii wadaan hawlaha nabada.
Maxaabiistan maanta la siidaayey ayaa la sugayey in la siidaayo saddex todobaad ka hore. Waxaa hubaal wali xabsiga Jijiga ku dhiman Maxaabiis ku xidhan magac ururka ONLF, kuwaas oo iyagana la filayo in dhawaan la siidayn doono iyada oo la fulinayo qodobadii heshiiska.
Dhamaystirka siidaynta maxaabiista ka dib, waxaa hubaal ah in ay wali dhiman yihiin hawlo badan oo ku saabsan qodobadii heshiiska ee u dhaxeeyey dawlada dhexe ee Itobiya iyo ururka ONLF, sida; dib u dajinta dadka qaxootiga ah ee wali ku jira xeryaha qaxootiga ee dalalka dariska. Arintan oo ay iska kaashanayaan dawlada dhexe ee Itobiya, ururka ONLF, dawlad degaanka Somalida iyo UNHCR.
Talaabada ugu horeysa ayaa ah in la helo kharajkii dib u dajinta ee dadka nolol loogu abuuri lahaa iyo waliba in la tiro koobo dadka diyaarka u ah in ay dalkooda ku laabtaan.
Masuuliyiinta ururka ONLF, ayaa sheegay in ay nabadi ka dhalatay degaanka Somalida, balse loo baahan yahay in la hirgaliyo waxyaabo badan oo heshiiska ka mid ahaa si uu dalku u helo nabad waarta iyo in ay dadku dareemaan in ay helayaan xuquuqdooda wadaninimo.
Kooxda Jwxo-shiil, oo Isku Dacwaysay Casmara Qaarkoodna la Xidhay